iPot's Autotarget dia ahafahan'ny mpivarotra manatsara ny valin'ny fampielezana mailaka amin'ny alàlan'ny faminavina mialoha Analytics. Ny fampiasana Autotarget dia naseho mba hampisondrotana ny tombom-barotra amin'ny fampielezana mailaka 20 isan-jato farafahakeliny ary hampihena be ny fihenam-bidy ary hampiakarana ny tahan'ny karama.
Ny teknolojia an-tserasera maminany an-dàlana tsy manam-paharoa an'i Autotarget dia miasa mafy ho an'ireo mpivarotra amin'ny alàlan'ny fampiasana vaovao efa nangoniny momba ny mpanjifa? fitondran-tena amin'ny fantsony rehetra. Ary, vaovao miaraka amin'ny kinova farany, Autotarget dia miasa amin'ny mpanome tolotra mailaka (ESP).
Autotarget dia entin'ny renirano data roa: voalohany, mailaka tsindrio avy eo ary tsindrio ny fijerena fihetsika ary, faharoa, fitondran-tena mividy fantsona. Autotarget dia mahazo hatrany tsindry mailaka ary jereo ny angona momba ny fitondran-tena mivantana avy amin'ny mpanome tolotra mailaka an'ny orinasa iray ankehitriny.
Mazava ho azy fa ny mpanjifa manana sanda RFM ambony indrindra dia mifamatotra bebe kokoa amin'ny marika, ary mety hamaly ny tolotra iray ary mitaky ambany, vitsy na, mety, tsy misy fihenam-bidy. Ny sary an'i OTost Autotarget RFM an'i iPost dia mampiseho ny isan'ny mpanjifa isaky ny sela RFM tena namaly (izay voatsindry, zahana ary novidina) na oviana na oviana amin'ireo mailaka voafantina. Miaraka amin'ity angon-drakitra ity, ny mpivarotra dia afaka mamorona ampahan'ny mpanjifa haingana sy mora mifototra amin'ny valin'ny sela RFM ho an'ny marketing manaraka mahomby.